Ukunyusa iwebhusayithi kwi-SEO kunye ne-Semalt
(kwimeko yephulo elinye eliqhutywa ziingcali zeSemalt)
Kungekudala, iWebhu yeHlabathi yayiyindawo elula yokufumana ulwazi. Kodwa yonke into itshintshile. Namhlanje, iNethiwekhi ibe sisixhobo esinamandla sokunyusa ishishini. Ukupapashwa kwephepha, izikhululo zonomathotholo, kunye nomabonwakude baphulukene nefuthe langaphambili. Kukho abantu abathenga amaphephandaba. Kusekho abaphulaphuli boonomathotholo. Imali ityalwe kwintengiso zikamabonwakude, kodwa wonke umntu uyaqonda ukuba ixesha selifikile lokwenyani ye-Intanethi. Apho abantu benza imali kunye nokuphuhlisa ishishini eliyimpumelelo.
Ixesha elitsha sele lifikile
Utshintsho olujikelezayo kumbono wehlabathi lwenzeka phambi kwamehlo ethu. Kukho abakhweli abahamba benyuka bejikeleza iWebhu yeHlabathi. Iitekhnoloji ezintsha zenza ukuba zikhule ngesantya esinye. Unokufikelela kwiNethiwekhi ngokusebenzisa i-smartphone yakho - jonga ividiyo, ufunde iindaba okanye ... uthenge iblouse entsha. Ukuhlawulela iimpahla kwi-intanethi kulula kakhulu. Umntu oqhelekileyo ngoku unokutyelela ivenkile ye-intanethi, azulazule kwigalari yemveliso, abuze umbuzo wabo. Nabani na unokufumana impendulo ngokukhawuleza kuba ingxelo ngumbandela oyimfuneko kwinkonzo yomthengi esemgangathweni. I-Intanethi sele iyindawo yentengiso apho ungathenga yonke into, kwaye kwangaxeshanye ube sisixhobo esinamandla sokuthengisa. I-boom yezoqoqosho kwiivenkile ezikwi-intanethi ngokuqinisekileyo ziqinisekisa izibonelelo zezixhobo zewebhu. Ngokwenene banokubanceda abanini besiza ukuba bonyuse ingeniso.
Ukunyuselwa kwiwebhu kukwenzelwa kuyo nayiphina ivenkile enabathengi abanokukhangela iinkonzo okanye iimpahla kwindawo ebonakalayo. Uninzi lweendwendwe zakho ngabantu abazizityebi. Baninzi abathengi abanokubakho abafuna iimpahla zakho, kodwa ... fumana iimveliso zabakhweli. Ngoba? Zenzeka phantsi kwelanga kuludwe lwezinto ezinqwenelekayo zewebhu kuba bezenze ngcono izixhobo zazo zeIntanethi phambi kwakho. Ngaba umntu unokugxotha aze abeke into endaweni yazo? Ewe, ukuba unikezela ngenkxaso yewebhu kwiingcali zeSemalt.
Ukuya kwizikhundla eziphezulu
Wonke umntu ovula ivenkile uyazi ukuba yintoni urhwebo kwindawo enomzi omdaka. Umthengi uyakufumana umbono wokuqala weshishini lakho ngaphambi kokuba undwendwele. Bajonge kwidilesi yevenkile kwaye bavavanye ukuphakama kwayo kwinqanaba le-subconscious. Inkampani, ephakathi embindini wedolophu, kunye neninzi yabakhenkethi kunye nabathengi abazizityebi, isendleleni yokuchuma. Abathengi abazizityebi baya kuza kuwe. Lo mgaqo awusebenzi kwimibutho yorhwebo kuphela. Amaziko omzimba, indawo yokuzivocavoca, iiphaza zikwathobela nemithetho yokuzibandakanya, njengevenkile ezinkulu okanye iikethi. Ngaba iyakothusa into yokuba kwi-World-Wide-Web yabantu ngesazela okanye ngokuzithoba baxhomekeke kwimbono efanayo malunga nodumo? Ukuba ukwishumi elishumi eliphambili, oovimba bakho bathathelwa ingqalelo kwaye bahlonelwe.
Njengakwivenkile engaxhunyiwe kwi-intanethi, indawo elungileyo kwindawo ebonakalayo inomtsalane abathengi. Ukuba ubonakala kwiziphumo eziphambili zokukhangela, iipesenti ezingama-95 zabathengi abanokukunika ingqalelo. Njengoko izibalo zibonisa, ziipesenti ezibini kuphela kwabo bafuna ukuzonwabisa ukufikelela kwiphepha lesine lewebhu lokukhangela. Ngokungafaniyo kwisitolo esingaxhunyiwe kwi-intanethi, ukufikelela kwizikhundla eziphezulu kuya kufuna ukuba kungabikho utyalomali oluninzi njengesicwangciso esifanelekileyo sophuhliso. Apha kunyanzelekile ukuba ufumanise ukuba akukho gosa lithembekileyo kurhulumente, kodwa elinolwazi. Iinkonzo zabo kufuneka zihlawulwe, kodwa intlawulo isezantsi kakhulu kunendleko yokuqeshisa kwindawo ehlonishwayo yongxowankulu. Kodwa nendawo yokuthengisa ethengisa embindini wedolophu yehlabathi yokucinga ayizukutsala abalandeli abaninzi abavela kumazwe ahlukeneyo njengezikhundla eziphezulu kwi-SERP yeGoogle.
Yintoni iprofayili yomthengi?
Ukunika uvavanyo ngokubanzi lwevenkile ye-intanethi kunye nokuxabisa ukuba yeyiphi imisebenzi ekufuneka yenziwe ngokuyintloko, ingcali ye-SEO kufuneka ihlaziye iimpahla kunye neenkonzo. Kweli nqanaba, kuyenziwa isicwangciso sokukhuthaza ishishini kunye nesicwangciso somsebenzi esigqibeleleyo. Makhe sijonge enye yeempumelelo ze- Semalt zomkhankaso - i-Insignis , Ivenkile yokuhlobisa ekhaya evela eRomania. Ithengisa izinto zentengiso yasendlini nangaphandle (ifanitshala, izibane, izixhobo zekhitshini, abanini beekhandlela, njl. Njl.). Inkampani ibonelela ngenkonzo ekumgangatho uphakamileyo kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo kwezinto ezithengiswayo kwiidolophu ezinkulu nakwizixeko zonke zelizwe.
Ukubonakala ngokubanzi kwevenkile ye-www yeefrikhwensi eziphakamileyo, umndilili, kunye nemibuzo ephantsi kakhulu ziye zahlalutywa. Kwangelo xesha, uchwepheshe we-Semalt wafunda iiprofayili zabakhweli kunye neenkokheli zentengiso ukufumanisa izibonelelo zabo. Kwaye kwafunyanwa isikhokelo sewebhusayithi ezikhokelayo ebaleni kunye neprofayile yazo yokunxibelelana, kunye nemibuzo echongiweyo yokwakha iphepha lokufika kwewebhu. Kwinqanaba lokuqala, i-Semalt pro iya kufumanisa ukuba indawo ifuna ukuphuculwa ngokubanzi. Ekugqibeleni, umntu unokucebisa ukuphuculwa kwesakhiwo sendawo-uyilo, ukukhangela, indawo kunye nomxholo weebhloko zolwazi, ukudalwa kwamaphepha ewebhu amatsha.
Kweli nqanaba lokukhankasela i-SEO , kufanelekile ukuqwalasela ukuba ungayiguqula na i-CMS, uhlengahlengiso lwendawo kwindawo yezixhobo ezikwiselfowuni, ubhale kwakhona i-http kwi-https, njalo njalo. Isidingo sokuphuculwa ngokubanzi kuxoxwa ngaso nomthengi ngaphambili, ngexesha lohlahlo-lwabiwo mali lokukhuthaza iwebhusayithi.
Kwesi sigaba, i-pro pro iyaqokelelana, amaqela kwaye ichonge imvamisa yentloko ye-semantic. Ngokuhambelana nefomathi yevenkile ye-www, isiseko semantic sinokubandakanya ukusuka kumakhulu ambalwa ukuya kumakhulu amawaka emibuzo yokukhangela. Ukwenziwa kwesiseko kunokuthatha iinyanga ezininzi, ke oku kuyenziwa ngokuhambelana neminye imisebenzi. Kwimeko ye-Insignis, sagqiba kwelokuba sikhuthaze amagama angamaqhosha aqhelekileyo kwiphepha lasekhaya, udidi lwemveliso, kunye nayo yonke imisila emide enesitayile esiphezulu kwi-100. Kwiinyanga ezimbini emva kokuqala kwentengiso, songeze ezinye iindidi ezimbini .
Nawuphi na umhlaba ufana nomthi apho isiqu sili phepha eliphambili, kwaye amacandelo kunye nezahluko zingamasebe namagqabi. Ububanzi bobume bayo buya kuba njani kwifomathi nohlobo lwendawo. Indawo enamaphepha elinye sele inesiqu somthi apho kukhula khona iindlela ezahlukeneyo. I-Insignis, njengazo zonke iivenkile ezikwi-intanethi, inesakhelo esinzima kakhulu nesinamanqanaba amaninzi. Kwiqela ngalinye lemibuzo yokukhangela, kuya kufuneka usete kwaye wandise iphepha lokukhangela. Kubalulekile ukukhumbula ukuba kwimibuzo ephantsi kakhulu, kungcono ukuhambisa iphepha eliyimveliso. Kwimibuzo enesantya esiphezulu, iindidi ezakhiwayo ekhaya zakhiwe.
Ukuphefumla kwamaphepha okufaka umhlaba amatsha ngexesha lokuphonononga ukukhangela kwabo bakhuphisana nabo, kunye nempahla kunye nenkonzo. Kwiivenkile ezinkulu zewebhu ezinamaziko okusasaza kwiidolophu ezahlukeneyo, njenge-Insignis, indawo yentengiso kunye neebhloko neeofisi ezinxulumene nazo, amanani okufika kwamaphepha aphindaphindwe ngenani lezixeko. Umxholo wewebhu ezinjalo kufuneka ungafani. Kwiiprojekthi ezinkulu, iphepha lewebhu lokuhluza elitsha lenze iminyaka emibini okoko kuqalile ukukhuthaza indawo. Ukufumana isiphumo esifunayo, owona msebenzi uphakanyisiweyo wolwakhiwo lwewebhusayithi kufuneka usekwe ngokukhawuleza.
Iinjongo zangaphakathi zokufezekisa
Ugqirha ulungisa iimpazamo zangaphakathi kwiwebhusayithi, esebenza ngamaphepha ewebhu okubuza kwiqela lemibuzo, asusa iimpinda zamaphepha. Ukwenza oku, uphicotho lwe-SEO lobugcisa lwendawo luqhutywa ngesiseko somsebenzi owenziwayo wangaphakathi wenziwe. Kwimeko ye-Insignis, umntu walungisa iimpazamo emva koko waqhubeka nokusombulula iingxaki eziphambili ezichongiweyo kuphicotho lobugcisa.
Umntu kufuneka enze le misebenzi ilandelayo:
ukongeza i-meta tag zekhasi lasekhaya usebenzisa amagama amakhulu asezantsi;
ukubeka isantya sokuphendula kweseva kunye nokulayisha amaphepha esiza;
ukususa amakhonkco aqhekekileyo;
ukulungisa zonke iimpazamo ezingama-404 kwaye uqiniseke ukuba zonke ii-URL zichanekile;
ukwenza idatha ehleliweyo yohlobo lweshishini laseKhaya kunye nolungelelwaniso lolwakhiwo kumakhaya asekhaya emveliso;
ukususa uphinda-phindo lwee-URLs usebenzisa ukuhanjiswa rhoqo, iidilesi ze-canonical, ukulandelwa kwe-noindex;
ukuhlengahlengisa iirobhothi.txt ukwenzela ukuvala iithegi ezifanelekileyo kunye nokukhusela ukuskena kwamaphepha ahlukeneyo wokukhetha kunye namaphepha okukhangela kwiwebhu;
ukuvelisa imephu yesiza seXML;
Ukubhala imixholo ye-SEO eyintloko kunye namaphepha odidi ngokusebenzisa amagama aphambili-achaphazelekayo;
ukuquka iiplagi ze-alt ezingezizo kwimifanekiso ngokusebenzisa isizukulwana ngokuzenzekelayo.
Kubalulekile ukuba ungakhethi kuphela amakhasi ewebhu kodwa wenze unxibelelwano lwangaphakathi ukuze abathengi kunye nesigcawu sewebhu bakwazi ukufikelela ngokulula kwamanye amaphepha ewebhu. Ngaphandle kokuba oku kwenziwe, abanakuphuma kwisalathiso sabakhweli bewebhu. Ingcali ye-SEO yakha ukudibanisa kwamanqanaba emenyu ngoncedo lweencwadi eziphuhlisiweyo, apho zongeza khona imibuzo eqokelelweyo kunye nokudityaniswa, ukudlulisela ubunzima bewebhu ukusuka kumaphepha akhuphisanayo asezantsi ukuya kumaphepha enqanaba eliphezulu lokungena nestokhwe.
Ukugcinwa komxholo weWWW
Ukulungiselela ukwenza ngesandla kwenza i-meta tag ezizodwa kunye nezihloko ze-H1 ngokusekelwe "kumsila omde" wezicelo zokukhangela kulawo maphepha ewebhu apho kufuneka khona. Kwakhona, kumaphepha akhuthazwayo kwivenkile ye-www, izicatshulwa ziyenziwa ezibandakanya imibuzo ephambili eqokelelweyo, ngokucacileyo, kuthathelwa ingqalelo izicelo zangoku zabakhweli bewebhu. Izibhalo zichaphazela zombini ukusetwa kwephepha yimibuzo ephezulu yemibuzo kunye nokubonakala kwemibuzo emde yomsila. Kwimeko ye-Insignis, enye ikwazile ukufikelela kwinqanaba eliphezulu kakhulu lamagama aphambili-amagama, kunye nayo yonke imisila emide ukuze ungene kwi-100 ephezulu. Ukongeza kwiphepha lewebhu eliphambili kunye neendidi eziphambili, la maphepha alandelayo afumene isabelo esikhulu kunazo zonke traffic - Izibane / izibane / izinto zokuhombisa / imibane.
Uhlahlo-lwabiwo mali lweCrawl
Eli lelona nani liphezulu lamaphepha esixhobo esinokukhangelwa ziirobhothi kuGoogle ixesha elithile. Kucetyiswa ukuba kuphela iingcali ezinamava ezisebenza ngohlahlo-lwabiwo mali lokukhasa. Ingcali ivale "amaphepha adoti" enzelwe abathengi kuphela, othintela abakhweli bewebhu ukutyelela "amaphepha enkunkuma" kwaye avale amakhonkco kuzo.
Ukuphuculwa kokuSebenza kweWebhusayithi
Ngaba i-algorithms yewebhu yokukhwela ithathela ingqalelo iimeko zokuziphatha? Benza. Yiyo loo nto i-SEO-pros isebenza kwimisebenzi efana nale:
ukungabuyeli komthengi kumboniso wokukhangela;
ukuncipha kwenqanaba lokugoba;
yandisa ixesha elichithwe kwiphepha lewebhu.
Ukulungiswa kwendawo yevenkile ye-www yezixhobo zeselfowuni kuya kwandisa ukubonakala kwesiza kwiziphumo zeselfowuni. Ikwakhokelela ekuguqulweni okuphezulu ukusuka kwizixhobo eziselfowuni. Ukuhamba kweenqanawa okwenziwe lula ngamaxabiso aphantsi. Uyilo olufanelekileyo lwephepha "Malunga nathi" liya kwandisa ukuzithemba kweendwendwe kunye nabakhweli bewebhu.
Ukusebenza kwewebhusayithi yangaphandle
Yeyiphi izixhobo eziluncedo? Oku kuluncedo kwezi ndawo zisebenza kwindawo enokhuphiswano kakhulu. Kwezinye iindawo zokhuphiswano olusezantsi, ungayenza ngaphandle kokudala amakhonkco angenayo. Kodwa kwiiwebhusayithi ezininzi, ukwenziwa kwangaphandle akunakuphepheka. Iindawo ezifanelekileyo ezinomxholo ofanelekileyo zikhokelela kuwe, kokukhona uya kuthembeka ngakumbi ukuba "ngamehlo" ezinqabileyo zewebhu. Kukho iiparamitha ezininzi umntu anokuthi akhe iprofayile yokunxibelelana kwaye akhethe abanikeli.
Ukunyusa ukuguqulwa ukusuka kubandwendweli ukuya kubathengi
Eli nqanaba lokukhuthaza iwebhusayithi lifuna ulwazi loyilo, ukusebenzisa, ukuthengisa nge-imeyile, kunye nezakhono zokwenza umxholo ekumgangatho ophezulu. Ingcali ye-SEO apha yenza ezi zinto zilandelayo:
lungisa iifom zoku-odola;
yongeza ii-algorithms zonxibelelwano kumphathi-kumanejala;
Utshintsha imibala yezinto zewebhu;
Ukuqwalaselwa kubangela incwadana yeendaba eqondene nomntu.
Kwaye oku kuyikhulu nje yokuphuculwa okunyusa ukuguqulwa kwesiza. Ukuba isiza empumelelweni ye-Insignis, elinye lamagama aphambili kule nkampani yathatha indawo yokuqala kwi-TOP-10. Elinye igama-eliphambili (odidi oluphambili) sele lifikile kwi-TOP-3. Impumelelo yokurhweba kwi-intanethi ayisiyonto ingaqhelekanga. Ingabonakaliswa kwiinyani. Impumelelo yephulo le-SEO lale nkampani yaseRomania kwiinyanga ezi-6 iboniswe kula manani alandelayo: amagama angama-232 aphambili kwi-TOP-1, kunye ne-1136 amagama aphambili akwi-TOP-TEN (ngokuthelekiswa nezalathi zangaphambi kwephulo. -4 kunye no-55 ngokwahlukeneyo. Ngexesha lenyanga yokuqala, inani labantu abakhangela ezi mveliso ngokokukhangela kwendalo lonyuke ngaphezulu kwe-1000. Umntu unokubona ukunyuka komvuzo kunye nokwamkelwa uphawu lomgangatho olungcono. Ngaba uyafuna ukuba onke amaphepha akwisayithi yakho abhalwe ngokukhawuleza? I-Semalt iya kukhetha eyona ndlela ilungileyo yokukhuthaza i-SEO.